Iko kushanduka kweApple Watch mumakore mashanu | Ndinobva mac
Iko kushanduka kweApple Watch mumakore mashanu
Pandakanga ndichigadzira iwo mufananidzo wechinyorwa chino, ini ndanga ndichiona kuti zvakajeka fananidzo haina kunyatsoita. Zviuru zvemakore zvakapfuura kubva padumbu kuenda kumunhu, uye rakakura kanenge kaviri kukura kwaro kwokutanga. NaApple Tarisa chete makore mashanu apfuura, uye ingori nemamirimita maviri chete.
Asi sechirevo, pfungwa yacho yakanaka. Iye murume achine maoko maviri nemakumbo maviri sekutanga kwake, asi izvozvi ane huropi hwakakomba hunogona kuita zvisingaite zvinhu. Ndo izvo zvinosiyanisa iyo yekutanga Apple Watch kubva kune akateedzana 5. Anenge akafanana muviri, mabhande akafanana, asi zvimwe mabasa yakafambiswa yemukati akateedzana mushure akateedzana. Ehezve, kubvira nhevedzano 3, inotova nemapapiro uye inogona kubhururuka chete kure neiyo iPhone.
Iyo Apple Watch yanga yave nesu kwemakore mashanu ikozvino. Kufanana nemidziyo mizhinji yeApple, vazhinji vakafinyamisa kana Tim Cook Akazvipa munaGunyana 2014. Ndiani angatenge 500 Euro wachi yedhijitari yaive isingabatsiri kana iwe ukasatakura yako iPhone muhomwe?
Zvirokwazvo mavambo ayo aive asina tariro kwazvo. Ini ndaive wekutanga kuzvitenga ku 2015 uye chokwadi ndechekuti, mhuri yangu neshamwari vakanditarisa zvisingaite pandakaidzidzisa nechido changu chose.
Makore mashanu gare gare, Apple inogona kutozvirova dundundu izvo inotengesa akawanda mawatch kupfuura ese maSwitzerland vagadziri vakasanganiswa. Uye anenge munhu wese ainditarisa nekusahadzika pakutanga iye zvino anopfeka chinosakara pamaoko avo.
Kubva 2015, Apple yakagadzirisa iyo Apple Watch gore rega, kugadzirisa dhizaini uye kuunza maficha nyowani uye matekinoroji. Hutano uye hutano ndizvo zvakakosha paApple Watch. Asi sezvaunozoona pazasi, iko kuvandudzwa kwakaunzwa neCupertino kunoshamisa zvechokwadi.
Apple Tarisa. Yokutanga yesaga. Hapana mazita.
2 Nhepfenyuro dzeApple 1
3 Nhepfenyuro dzeApple 2
4 Nhepfenyuro dzeApple 3
5 Nhepfenyuro dzeApple 4
6 Nhepfenyuro dzeApple 5
Yekutanga Apple Watch yakatangwa muna 2015. Yakanga isina serial nhamba, yaingova Apple Watch, hapasisina. Nekudaro, paive nemitsara mitatu yakasiyana yeApple Watch payakatanga. Yekutanga yaingodaidzwa kuti "Apple Watch", iyi yaive yekutanga edition yaive yakagadzirwa nesimbi isina chinhu. Zvino kwaive neApple Watch Sport ine mabhendi uye nealuminium kuvaka yakaitwa kukwidza kune vatambi. Uye pakupedzisira, paive neshanduro yeApple Watch yakagadzirwa 18 karati ndarama chete kune avo vane rombo rakanaka.
Sezvo iwe uchigona kufungidzira kubva kune goridhe yakashandiswa kugadzira iyo Apple Watch Edition, yakatengeswa se zvishongedzo zvepamusoro. Pasina mubvunzo kutaura, iyo Apple Watch edition haina kutengesa zvakanaka zvachose uye yakadonhedzwa gore rinotevera. Apple dzimwe nguva ine zvinhu izvi.
Iyo yekutanga Apple Watch yakauya nehukuru hwe 38mm uye 42mm uye yakaratidza Wi-Fi neBluetooth. Kuwana Internet kunoda pairing ne iPhone. Dzese dzaivewo nekorona yedhijitari, Multi-Kubata, Simba Kubata, Dhijitari Kubata, uye bhatani repadivi. Ivo vese vaipfekawo optical moyo sensor. Kubatana kwayo neiyo iPhone hutano app yaive yakapusa. Semuenzaniso, ini ndaifanirwa kuisa yechitatu-bato kunyorera (HeartWatch) kuti ndikwanise kubata yangu yemoyo data data. Aive mavambo.
Nhepfenyuro dzeApple 1
Kwapera gore, Apple yakatounza yayo yekutanga yekuvandudza kuApple Watch. Zita rekupedzisira re "series 1" ratobuda. Mune dzino zvakateedzana iyo kambani yakadzikisa mutengo zvishoma kuti iite iyo inodhura kwazvo nyowani-wekupinda-chikamu modhi kune vanhu vazhinji. Iyo yakachengeta maficha akafanana neiyo yekutanga Apple Watch yaive nayo: Dhijitari Korona, Multi-Kubata, Simba Kubata, Dhijitari Kubata, uye Kurutivi bhatani.
Nhepfenyuro dzeApple 2
Apple yakaunzawo Apple Watch Series 2 gore iro. Iyi modhi zvakare yakanga iine muviri wealuminium, asi iyo huru poindi yekusiyanisa yaive yekuti, kusiyana neiyo Series 1, iyo Series 2 yaive nayo Yakavakwa-GPS. Izvi zvaireva kuti hauchadi iPhone yako kuti ubatane neApple Watch yako kuti uwane data renzvimbo. Yakanga yatotanga kupatsanura zvishoma kubva kune nhare, asi zvakadaro isina kubhururuka ndega.
Iyo Series 3 LTE yakabhururuka ichibva mudendere, kure neiyo iPhone.
Muna 2017, Apple Watch yakamera mapapiro ndokubhururuka pachawo, kure nedendere raAmai iPhone. Yakawedzera sarudzo ku Apple Tarisa Cellular. Yaiva yekutanga yakamira Apple Watch ine yakananga LTE kubatana kune iyo 4G foni netiweki. Musoro wemakambani efoni, anga asina kugadzirira chiitiko chakadai. Movistar yakatora ingangoita mwedzi mitanhatu kuti ikwanise kuvhara makadhi eSIM matsva anodiwa muApple Watch. Akapenga.
Series 4, iine skrini hombe.
Maviri matsva akakosha akaratidzira iyo nyowani Apple Watch ye2018. Yekutanga, iyo yakakura mamirimita maviri kunze, uye zvidzitiro zvakawedzera ne20% mukati. Panzvimbo pekuuya ne 38mm uye 42mm saizi, iyo Series 4 yakauya nehukuru hwe 40mm uye 44mm. Ivo nenzira kwayo vakachengeta zvimisikidzo zvakafanana zvine tambo dzakafanotangira. Bhokisi rakakura, mabhande akafanana.
Iko kumwe kuvandudzwa kukuru kune iyo Series 4 kwaive kuwedzera kweyemagetsi moyo sensor (ECG / EKG). mabvazuva electrocardiogram inobvumira vashandisi kuti vatarise kurovera kwemoyo wavo chero nguva uye kana wachi ichiwana yakakwira kana yakaderera kurova kwemoyo, inokuzivisa iwe, kunyangwe iwe pausinganzwe zviratidzo.
Series 5 nekambasi uye inogara iri-pachiratidziro.
Iyo ndiyo yazvino modhi. Yakatangwa mu2019, ine chinhu chitsva chinoita kuti chisiyane nemamwe ese epfuura mana akateedzana, iyo "Inogara iri pa" skrini. Iyo Series 4 inoratidza inogara iri-inoratidzwa. Iyo zvakare ine chaiyo kambasi yedhijitari.
Asi iyo shanduko iri pane yako nyowani skrini. Inoita kuti nguva yekurinda iratidzike, isingakanganise kuzvimiririra kwechigadzirwa. Zvinotaridza sekuvandudzika kudiki, asi zvinoshandura zvakanyanya mapfekero aunoita uye kuona Apple Watch. Kutenda kune inogara ichiratidzwa, iyo Series 5 ikozvino inonzwa se "wachi" yechokwadi kekutanga munhoroondo.
Kufanana neyese ramangwana Apple zvigadzirwa, zvishoma zvinozivikanwa nezve inotevera Apple Watch. Chokwadi ndechekuti panguva ino iye ari mune yakanaka kwazvo yekutengesa hutano, achizvisimbisa iye seiye anopfeka mutungamiri kuti iwe unogona kupfeka paruoko rwako. Kune makwikwi mazhinji muchikamu ichi, ine zvigadzirwa zvakanaka kwazvo uye zvimwe kwete zvakanyanya, asi pasina mubvunzo Apple Watch inopa mabhenefiti uye rutsigiro rwekambani izvo zvakaoma kurova.
Zviri pachena kuti hazvina kukwana, uye pane zvinhu zvaunoda kugadzirisa pairi. Makore mashanu apfuura uye ake kuzvitonga kunoramba kwakafanana, zuva rakanaka uye ndinokutendai. Zvishoma kwazvo, chaizvo. Uye kana iwe ukasiya iyo iPhone kumba ukadhonza iyo LTE kubatana, ini handitombo kukuudza iwe. Rimwe basa rinoita kunge rechokwadi nderekuti rinokuratidza iwo mwero weoxygen muropa rako. Muchokwadi, panyama iyo sensor yeApple Watch yaigona kutotiratidza kare, asi isu hatizive kuti nei Apple isina kuishandisa muWatchOS panguva ino. Izvi, pamwe nekutonga kwezviitiko zvekurara, zvinoita sekunge ivo vanozove anotevera matsva eiyo Series 6. Vashoma vari. Ndinovimba Tim Cook anotishamisa nechimwe chinhu….
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iko kushanduka kweApple Watch mumakore mashanu
Bug mune macOS inogona kukusiya kunze kwenzvimbo paHD
Maitiro ekuratidza zviwanikwa zvewebhu peji neSafari